सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने यी हुन ओलीका ३ विकल्प, महासचिव र उपाध्यक्षमा रोजे यी २ पात्र ! – GALAXY
सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने यी हुन ओलीका ३ विकल्प, महासचिव र उपाध्यक्षमा रोजे यी २ पात्र !
काठमान्डौ – एमाले नेताहरूले १०औं महाधिवेशनबाट सहमतिमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने भनिरहेका छन्। अध्यक्ष पदमा केपी शर्मा ओली निर्विकल्प देखिन्छन्। तर, सहमतिमा अन्य पदाधिकारी को–को आउलान् रु १० बुँदे सहमति गरेका र माओवादीबाट आएका नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी होला भन्ने चासोको विषय बनेको छ।